Muuri News Network » SAWIRRO: Puntland oo wada Qorshe lagu duminayo Maamulka K/galbeed.
SAWIRRO: Puntland oo wada Qorshe lagu duminayo Maamulka K/galbeed.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa maanta 24-April-2016 waxa uu qado sharaf u sameeyey Madaxweynaha maamul goboleedka Bakool Sare Axmed Maxamed Mashruuc iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayey.
Waftiga ayaa waxaa kamid ahaa Ugaaska Guud ee Deenaadana Bakool Sare Ugaas Xuseen Ugaas Cabdi Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif iyo xubno ka tirsan maamulka Bakool Sare, sidoo kale dhinaca Puntland waxaa qado sharfta kasoo qayb galay guuddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Puntland.
Ujeedka socdaalka Madaxweynaha Bakool Sare iyo waftigiisa ayaa salka ku haya marti-qaad rasmi ah ay ka heleen Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isla markaana ay doonayaan muddada ay ku sugan yihiin Puntland in ay ka faa’iidaystaan waayo –aragnimada gaamurtey ee Puntland ee dhinacyada dhismaha hay’adaha dawladda iyo sarraynta sharciga ee ka jirta Puntland.
Madaxweynaha Maamulka Bakool Sare ayaa kusimaha Madaxweynaha Puntland uga mahadcliyey sida qiimaha leh ee ay usoo dhoweeyeen iyo sidoo kale taageeradii ay Puntland hore ugu fidisay maamulka Bakool Sare xilligii ay u baahnaayeen garab istaagga ee la yagleelay.
Sidoo kale Madaxwyne Axmed Mashruuc waxa uu sheegay in uu doonayo Puntland in ay ka wadatashadaan qaabkii maamulka Bakool Sare uu uga qayb-qaadan lahaa doorashada 2016-ka iyo qaabka xulista labada aqal ee baarlamaanka dawladda Federaalka Soomaaliyeed.
Tilaabadaan ay qaaday maamulka Puntland ayaa ah mid ka careysiisay madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan sheekh Aadan maadaama deegaanada Bakool sare uu isaga ka arimiyo.